मार्च १५ देखि फेसबुक बन्द हुने हल्ला को आतंक #facebook
Aakar January 09, 2011
मार्च १५ देखि फेसबुक बन्द हुने हल्ला ले फेसबुक, ट्विटर र ब्लग मा निकै चर्चा पाइरहेको छ । तर विश्वस्त हुनुहोस् यो हल्ला मात्र हो । हल्ला कसरी सुरु भयो र कसले चलायो त्यो त थाहा छैन, तर पनि तपाई ढुक्क हुनुहोस् कि, यो हल्ला मात्र हो ।
झुटो खबर छापेर, सनसनी मच्चाउने केही साइटहरुमा मार्च १५ देखि फेसबुक बन्द हुने हल्ला को खबर प्रमुखता का साथ छापिएको छ ।
ती भ्रम छर्ने साइटहरु ले लेखेका छन् “मार्क जुकरवर्ग ले फेसबुक बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्” । ती साइटहरुले मार्क जुकरवर्ग को हवाला दिँदै, जुकरवर्ग ले “आफूले फेसबुक सम्हाल्न नसकेको र, आफूलाई धेरै टेन्सन भएको” बताए भनेर, समाचार लेखेको छ ।
ती समाचारहरु मा, फेसबुक का विभिन्न पदाधिकारीहरु ले भनेको भनाइ भन्दै, “फेसबुक मार्च १५ देखि बन्द हुने हुँदा, आफ्ना सम्पुर्ण फोटोहरु डाउनलोड गर्न सुझाएका छन्” भनेर लेखेको छ । साइटहरुले लेखेका छन्, “मलाई पैसा को अब आवश्यकता छैन, म आफ्नै पुरानो जिवन मा फर्कन चाहन्छु भनेर, मार्क जुकरवर्ग ले भने ।
“विश्वास गर्नुस् फेसबुक बन्द हुँदैन !”
फेसबुक मा अधिकांश साथीहरुले त्यही झुटा खबरका लिंकहरु सेयर गरिरहनु भएका कारण हामी तपाईहरुलाई के आग्रह गर्छौँ भने, ती खबरहरु सरासर झटा हुन् । अर्वौ मा व्यापार गरिरहेको साइट र ५ सय मिलियन प्रयोगकर्ताहरु भएको साइट बन्न हुँदैन । हल्ला को पछि लागेर, फेसबुक बन्द हुँदैछ भन्ने कुरा नपत्याउनु हुन आग्रह गर्दछौँ । केही दिन अघि मात्रै पनि ‘गोल्डम्यान’ नामक व्यक्ति ले ५ सय करोड डलर, फेसबुक मा लगानी गरेका छन् । के ५ सय करोड डलर लगानी भएको साइट, के बन्द हुन्छ भनेर तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ?
यस किसिम का भ्रामक खबरहरु इन्टरनेटमा बारम्बार फैलिरहेकाछन् । खबरहरु यति सम्म भ्रामक हुन्छन् कि, केही समय पहिले ‘थ्रि-डी, ब्लु मुभी’ हेरेर महिला गर्भवति भएको वाहियात खबर फैलिएको थियो । केही दिन अघी मात्रै पनि, एक हलिउड कि स्टार को मृत्यु भएको खबर फैलिएको थियो । केही समय पहिले सन् २०१२ मा विश्व ध्वस्त हुने भन्ने कुरा ले पनि निकै चर्चा पाएको थियो, त्यही चर्चा का कारण २०१२ नामक अंग्रेजी चलचित्र को व्यापार पनि राम्रै भयो । तर त्यो २०१२ नामक चलचित्रलाई सन् २०१० कै सबैभन्दा खराब ‘साइन्स फिक्सन’ चलचित्र मानिएको छ ।
नेपालीहरु का बिच मा मनोकामना, बमभोले, गणेश, सन्तोषी माता आदि का नाम मा पर्चा बाँढेर चलाइने हल्ला जस्तै यो पनि तल्लोस्तर को हल्ला हो । अत: भ्रामक खबर को पछाडी नलागौँ, वित्थामा हल्ला फैलाउने लिंकहरु सेयर नगरौँ र नचाहिँदो रुपमा अरुलाई ट्याग गर्ने काम पनि नगरौँ । फेसबुक सुरक्षित छ, तपाई को फोटोहरु पनि सुरक्षित नै रहनेछ, फेसबुक बन्द हुने छैन ।
itsNepal January 13, 2011 at 8:36 PM
Beingafan of aakarpost i want all fans of aakarpost Review this blog about nepal tourism year 2011
i wait response of aakarpost fans...for http://itsnepal.blogspot.com
yedi Mark lai facebook chalauna man na lage kasailai beche ra aananda le basna sakchha tara facebook banda huna sakdain. dhukka bhayera facebook chalayera aananda lida hunchha
Rabindra August 1, 2012 at 11:44 AM
फेसबुक को लोकप्रियता कम हुँदै जानेछ भन्ने खबरलाइ १ कान २ कान मैदान बनाउँदै बन्दै हुन्छ भनेर उडाएछन्, मिडिया मा ह्विप चल्न कति सजिलो छ भने अचेल ।
itsNepal August 1, 2012 at 11:44 AM
its great aakarpost.com , me also sure never facebook END , hi all freinds pls Reviews this Nepal tourism Blog we work hard
my blog is http://itsnepal.blogspot.com
i want showablog also will be good...pls help me all blogger freind
Dilip Acharya August 1, 2012 at 11:52 AM
मार्च १५ मा फेसबुक बन्द हुने चाहीँ हैन, त्यतीबेला सम्ममा फेसबुकमा २-४ वटा नयाँ फिचरहरु भने पक्कै थपिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई त :)